सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन : प्राणघातक दुव्र्यसन - Khapung.com
डा. अन्जु खापुङ १७ पुष २०७७, शुक्रबार २३:३२ 558 पटक हेरिएको
डा. अन्जु खापुङ कान्तिपुर डेन्टल कलेज
धुम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ’ यो सन्देशमूलक वाक्य नसुन्ने मानिस कमै होलान् । टिभी, रेडियोमा दिइने विज्ञापन होस् वा चुरोट, खैनीको बट्टा बाहिर वा पत्रपत्रिकामा होस् यस्ता सन्देश सहजै पढ्न, सुन्न र हेर्न सक्छौं । तर, धुम्रपान गर्ने मानिसको संख्या भने घटेको छैन । धुम्रपान भन्नाले खासगरी सुर्तीको धुवाँ खानु हो ।
सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनको तरिका दुई प्रकारका हुन्छ । पहिलो सुर्तीको धुवाँ तानेर चुरोट, बिँडी, चिल्लम, हुक्का, सिगार, आदिको प्रयोग र दोस्रो धुवाँरहित खैनी, जर्दा, गुट्खा, पान पराग, मसेरी, गुल आदिको प्रयोग ।
सुर्ती सेवनबारे जान्नै पर्ने तथ्य धुवाँ भएको सुर्तीजन्य पदार्थमा ७,००० प्रकारका रसायन हुन्छन् जसमध्ये ६९ वटाले क्यान्सर गराउँन सक्छन् । धुवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थमा ३,००० प्रकारका रसायन हुन्छन् जसमध्ये २८ वटाले क्यान्सर गराउँन सक्छन् । फोक्सोको क्यान्सरको प्रमुख धुम्रपान हुने गरेको छ । विश्वमा धुम्रपानको कारणले प्रत्येक ७ सेकेण्डमा एउटा मान्छेको मृत्यु हुन्छ । सुर्तीजन्य पदार्थ मुखको क्यान्सरको प्रमुख कारण हो ।
किन गरिन्छ सुर्तीसेवन ?
साथीभाई, परिवारको प्रभाव टिभीमा कलाकारले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेको देखेर प्रेरित भएर एकपटक चाख्दा कस्तो होला भन्ने उत्सुकताले तनाव हुँदा आनन्दपनको अनुभूति हुने गलत धारण सुर्ती सेवन छोड्न यसकारण गाह्रो मुख्य लत लगाउने तत्व सुर्तीमा रहेको निकोटिन हो । सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेपछि हाम्रो रगतबाट निकोटिन मस्तिष्कमा पुग्छ र त्यसले त्यहाँ डोपामिन भन्ने रसायन धेरै मात्रामा बढाउँछ । यो पदार्थले क्षणिक खुशी र स्फूर्ति महसुस हुन्छ । यो प्रकृया केहि समयको लागि मात्र हुन्छ ।
निकोटिनको मात्रा घटेपछि शरीरलाई फेरी यसको आवश्कता पर्छ र सुर्ती खान तलतल हुन्छ । यसरी शारीरिक निर्भरता बढ्ने भएकोले यो बानी छोड्न निकै गाह्रो हुन्छ ।
सुर्ती सेवनका असरहरू
श्वासप्रश्वास सम्वन्धी रोगहरू (दम, खोकी, ब्रोङ्काइटिस सास फेर्न गाह्रो हुने मुखको दुर्गन्ध दाँतमा फोहर हुने गिजाको समस्या मुखमा घाउ र सेता दाग आउने पेटको समस्या (पेट दुख्ने पेटमा घाउ हुने, वाकवाक लाग्ने) उमेरभन्दा अगाडि नै बुढो देखिने छाला चाउरी पर्ने मुटुको रोग हड्डी कमजोर हुने फोक्सो र मुखका साथै शरीरका अन्य भागमा पनि क्यान्सर हुने धुम्रपानले अरुलाई पनि असर धुम्रपानले हामी आफूलाई मात्र होइन, यसबाट निस्कने धुवाँले आफू वरपरका व्यक्तिलाई पनि हानि गरिरहेको हुन्छ । यसलाई निस्क्रिय धुम्रपान भनिन्छ । धुम्रपान गर्ने व्यक्तिमा हुनसक्ने समस्याहरू निस्क्रिय धुम्रपान गर्नेमा पनि उत्तिकै देखिन्छ । यसले प्रायः बालबालिका, गर्भवती महिला र गर्भमा रहेको शिशुलाई धेरै असर गर्छ । सोफा, पर्दा, कपडाहरूमा रहेको धुँवाले पनि नराम्रो असर गर्दछ भन्ने कुरा प्रमाणित भईसकेको छ र यसबारे थप अनुसन्धान हुँदैछ । यसलाई थर्ड ह्याण्ड स्मोकिङ भनिन्छ ।
सुर्ती किन त्याग्ने ?
स्वस्थ्य, सुन्दर र सुरक्षित जीवन बनाउन । सुर्तीमा हुने अनावश्यक खर्च जोगाउन । समाजमा एउटा प्रेरणादायी आदर्शको पात्र बन्न, जसबाट आफ्नै परिवारका सदस्यले, छिमेकी र साथीभाईले पनि अनुकरण गरुन् ।
सुर्ती कसरी त्याग्ने ?
सुर्तिजन्य पदार्थको नकारात्मक असर थाहा हुँदा पनि र मैले यो दुव्र्यसन छोड्नुपर्छ भन्ने भावना हुँदा पनि शारीरिक र मानसिक निर्भरताले गर्दा यसलाई त्याग्न निकै गाह्रो हुन्छ । यसको लागि दृढसंकल्प र तत्परताको आवश्यकता पर्छ । आफूलाई गाह्रो हुँदा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको मद्दत पनि लिन सकिन्छ । धुम्रपान छोड्दा योजना बनाउनुपर्छ । पहिले त छोड्ने एउटा निश्चित दिन तोक्नु पर्छ । सुर्तीको नकारात्मक असर मात्र छन्, सकारात्मक केहि छैन भन्ने कुरा मनमा हुनु पर्छ । यसले आफूलाई छोड्ने प्रेरणा दिन्छ ।
सुर्तीसेवनसँग सम्वन्धित क्रियाकलाप जस्तै: चिया, कफी, खराब सँगतमा घुलमिल, मद्यपान, तनाव, आदिबाट टाढा रहनुपर्छ । तलतल लाग्दा चुइगम, ल्वाङ्ग, सौफ चपाउने, बिस्तारै लामो श्वास लिने र फाल्ने, प्रशस्त पानी पिउने र आफूलाई व्यस्त राख्ने । तलतल केही क्षणलाई मात्र हुन्छ, यो बेला आफूमाथि नियन्त्रण गर्न सकियो भने यो दुव्र्यसनलाई त्याग्न सजिलो हुन्छ । सुर्तीजन्य पदार्थमाथि धेरै नै निर्भरता भएको छ भने स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श लिएर निकोटिन चुइगमको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
लखि खापुङ प्रसादसिंह सुब्बा